कोभिड, नन–कोभिड बिरामी एकै अस्पतालमा उपचार, इटालीबाट नसिकेको पाठ ! – Health Post Nepal
२०७७ साउन २९ गते १०:२५
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै निजि तथा सामुदायिक सबै अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड कोभिड–१९ का बिरामी छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशकको घातक परिणाम आउँनसक्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
एउटै अस्पतालमा संक्रमित र अन्य बिरामी राख्दा व्यवस्थापन गर्न कठीनाई हुने र त्यसले रोग फैलिने र मृत्युदर समेत बढाउँने विभिन्न अनुभवले देखाएको छ । तर सरकारले कोभिडका लागि छुट्याएका अस्पताल भरिएपनि नयाँ व्यवस्था गर्नुको सट्टै जनरल अस्पतालमा नै कोभिड १९ का बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले सबै अस्पतालमा सीमित वेड छुट्याउनुको सट्टा सरकारले प्रयाप्त पूर्वाधार भएका केही अस्पताललाई नै संक्रमित राख्न उपयुक्त हुने बताए ।
सबै अस्पतालमा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र कोरोना उपचारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति छैनन्, डा. कार्कीले भने,‘ कोभिड तथा नन कोभिड बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राख्दा संक्रमणको हब बन्नसक्छ।’
जनस्वास्थ्य चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. भीम आचार्य सबै संक्रमितलाई एउटै अस्पतालमा राख्न नहुने बताए । चोट–पटक, ट्रमाका केस अन्य नसर्ने रोगका लागि केहि बेड छुट्याएर उपचार गर्नु राम्रो हो। तर, सरुवा रोगका बिरामीलाई यो सम्भव छैन।
अन्य देशमा कोभिड तथा नन् कोभिडका बिरामी एउटै अस्पतालमा राख्दाको नतिजा देख्दा–देख्दै पनि सरकार संवेदनहीन देखिएको डा. आचार्य बताउँछन्।
चोट–पटक, ट्रमाका केस अन्य नसर्ने रोगका लागि केहि बेड छुट्याएर उपचार गर्नु राम्रो हो। तर, सरुवा रोगका बिरामीलाई यो सम्भव छैन।
सरकारले नेपालमा संक्रमण सुरु हुनासाथ पनि अस्पतालाई संक्रमितको लागि आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, विज्ञहरुले केही अस्पताललाई डेडिकेट रुपमा कोभिड बिरामीलाई मात्र उपचार गर्ने सल्लाह दिएपछि सरकार पछि सो निर्णयबाट हटेको थियो।
सरकारले सोही पुरानो निर्णयलाई दोहोराएको छ। जसका कारण संक्रमणले ठुलो रुप लिने विज्ञहरुको त्रास छ । त्यसका लागि अस्पतालले पूर्वाधार, जनशक्ति र सुरक्षा सामग्रीको समेत जोहो गर्न नसक्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
यति संक्रमितलाई अन्य विरामी भएका अस्पतालमा आउँन दिँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा बलियो भएको इटाली जस्तो देशले भयावह स्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो ।
‘सबै बिरामीलाई एउटै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा दर्दानाक अवस्था आयो,’ डा. कार्की भन्छन्,‘ यही निर्णय लागू गर्ने हो भने हाम्रो देशको परिणाम पनि त्यही हुन्छ। यो निर्णय तत्काल सच्याउन पर्छ।’
नयाँ संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्न गाह्रो हुन थालेपछि सबै अस्पताललाई कुल बेड संख्याको २० प्रतिशत कोभिड–१९ का विरामीका लागि छुट्याउन भनिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
गौतमले भने ‘घरमा बसेर ‘फ्याऊफ्याऊ’ कराउनुभन्दा मन्त्रालयमा आएर सुझाब दिनुस्’
डा. गौतमले त्यतिबेला चीन, इटाली जस्ता देशमा कोरोनाबाट कम ज्ञान भएकोले भयानक अवस्था आएको भन्दै अहिले ज्ञान भएको भन्दै त्यस्तो अवस्था नआउने दावी गरे ।
‘सुरुमा कोरोना भाइरसको बारेमा केही पनि जानकार थिएन, अहिले सबैलाई थाहा छ। इटालीको मात्र किन उदाहरण दिने अन्य देशहरुको राम्रो गरेको उदाहरण होला नि !’ डा. गौतमले प्रतिप्रश्न गरे।
‘केही सुझाव दिनु छ भने मन्त्रालय आउनु पर्यो नि, सरकार के सबैको घर–घरमा जान्छ, डा. गौतमले भने,‘ ५ वटा निजी अस्पताल मिलेर आउनु, कुनै एकलाई कोभिड अस्पताल बनाउँला ।’
लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखेको डा. गौतमले बताए ।
उनले अस्पताल भर्ना गर्नुपर्नेलाई घरमा राखेर नहुने भन्दै आवश्यक परेमा २० प्रतिशत मात्र होइन अस्पताल पुरै खाली गनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्ने बताए ।
डा. आचार्यले भने सरकारले सुरुदेखि नै संक्रमणलाई नजरअन्दाज गरेकोले यो अवस्था आएको बताए ।
कोभिडको लागि पहिलादेखि ५–७ वटा निजी अस्पतलाई जिम्मेवारी दिएको भए अहिले सबै अस्पतालमा अंशभण्डा गर्नपर्ने अवस्था नआउने डा. आचार्य बताउँछन्।
सरकारले हरेक अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड माग्नुको सट्टा केहि अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा लिने सो बापत केहि रकम दिएर आफै सञ्चालन गर्ने तर्फ जानुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ।
स–साना गल्तीले नियन्त्रणमा चुक्दै सरकार
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार स–साना गलत निर्णयको कारण चुक्दै गएको विज्ञले बताइरहेका छन्।
सुरुका दिनमा भारत तथा अन्य राष्ट्रबाट स्वदेश फर्किने लर्को लाग्यो। तर, ती सबै मानिसलाई सरकारले निगरानीमा राखि क्वारेन्टाइनमा सम्म पुर्याउन सकेन।
क्वारेन्टाइनमा पुगेका मध्ये पनि सबैको परीक्षण हुन सकेन।
सरकारसँग क्वारेन्टाइनमा बसेका कतिलाई परीक्षण गरेर घर पठाइयो भन्ने कुनै एकिन तथ्यांक छैन, डा. कार्की भन्छन्,‘ क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसलाई परीक्षण नगरी घर पठाउँदा समुदा स्तरमा समेत संक्रमण फैलिन पुग्यो।’
यो सरकारको पहिलो गल्ती भएको डा. कार्कीको बुझाई छ ।
दोस्रो गल्ती सरकारले परीक्षणको गाइलाइन बनाउँदा गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
सरकार तत्कालीन अवस्थामा परीक्षणको मापदण्ड बनाउँदा लक्षण नभएका लागि, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई पनि परक्षिण नै घर पठाउने नीति लिएको थियो ।
त्यसले संक्रमण समुदायमा फैलिनको मद्दत पुगेको विज्ञहरुको बुझाई छ । तेस्रो गल्ती सरकारले महामारीको नजरअन्दाज नै नगरी लकडाउन खुल्ला गरेको डा.कार्कीले आरोप लगाए ।
लकडाउन खुला भएपछि संक्रमण बढ्ने सबै जानकार नै थिए।
लकडाउन भनेको उपचार होइन, आउन सक्ने संक्रमणलाई पर सार्ने मात्र हो। तर, लकडाउनको समयअवधिमा सरकारले कुनै तयारी नै गरेन।
यसबीचमा संक्रमण बढ्ने नजरअन्दाज गर्दै सरकारे आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, बेड, जनशक्तिलाई तालिम दिने जस्ता विषयमा पुरै तयारीमा जुट्नु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेको र करलाई प्राथमिकता दिएको डा. कार्कीको आरोप छ ।
हाल, संक्रमण दिन–दिनै चुलिँदै गएको छ। अस्पतालमा बेड नपाएर संक्रमित मानिस रोइकराई गरिरहेका छन्। तर, सरकार मुक्कदर्शक भई ‘होम आइसोलेसन’मा बस्नु भनेर निर्देशन दिइरहेको छ।
पछिल्ला दिनमा लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। आइसियु भेन्टिलेटर, आइसोलेसन बेड भरिभाउ छन्। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण हुँदा दक्ष जनशक्ति अभाव भइरहेको छ। यी सबै सरकारले गरेको स–सना गल्तीको परिणाम भएको डा. कार्कीको बुझाई छ ।